यो हप्ता तपाईको कस्तो बित्ला ? साप्ताहिक राशिफल !हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल ! – Khabar PatrikaNp
यो हप्ता तपाईको कस्तो बित्ला ? साप्ताहिक राशिफल !हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल !
हप्ताको प्रारम्भमा रमाइलो यात्राको योग बन्नेछ। मिहिनेतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। साहस तथा पराक्रम बढ्नेछ। हप्ताको मध्यमा भने स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ, खान-पानमा विशेष ध्यान राख्नुहोला। कार्यभार बढ्नेछ। आर्थिक अवस्था कमजोर रहने देखिन्छ। हप्ताको अन्त्यतिर परिस्थिति अनुकूल हुनसक्छ। शुभचिन्तकहरूको सहयोग जुट्नेछ।
कार्यक्षेत्रमा नयाँ अवसर मिल्नेछन्। शत्रु तथा प्रतिस्पर्धी पराजित हुनेछन्। आयको स्रोत बढ्नेछ। अधुरा रहेका कार्य पूरा हुने सम्भावना छ। नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागि पनि समय उत्तम रहेको छ। रमाइलो यात्राको योग बन्नेछ। भौतिक सुख प्राप्त हुने देखिन्छ। हप्ताको मध्यतिर परिस्थिति केहि प्रतिकूल हुनसक्छ, केहि चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला। स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुहोला। हप्ताको अन्त्यतिर स्वास्थ्यबाधा, काममा अवरोध र केहि झमेला आइपर्ने सम्भावना छ।
कार्यक्षेत्रमा केहि चुनौतीको बाबजुद सफलता प्राप्त हुनेछ, साथै नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछ। अध्ययनमा राम्राे प्रगति हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा समय अत्यन्त शुभ रहने देखिन्छ। मिहिनेतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। यात्राको योग बन्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। नयाँ कार्य गर्नको लागि समय राम्रो रहेको छ। नयाँ मित्रहरु बन्नेछन्।
परिवारमा मनमुटावको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। जिद्दी व्यवहारको कारण समस्या आइपर्न सक्छ। हप्ताको मध्यमा भने समय अनुकूल बन्नाले विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन्। आयको स्रोतमा वृद्धि हुनेछ। शत्रु तथा प्रतिस्पर्धीबाट हानि हुनसक्छ, सतर्क रहनुहोला। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। मिहेनत गरे कार्यक्षेत्रमा विशेष लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ। व्यापार व्यवसायमा बिस्तार हुनेछ।
कार्यक्षेत्रमा विशेष सफलता मिल्ने सम्भावना रहेको छ। नयाँ काम सुरु गर्नको लागि यो हप्ता अत्यन्त शुभ छ। आफन्तको सहयोगले कार्य सफलता मिल्नेछ। हप्ताको मध्यमा भने पारिवारिक समस्याले सताउन सक्छ। कार्यमा पनि अवरोध आउनसक्छ। हप्ताको अन्त्यतिर भने परिस्थिति अनुकूल हुनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा मान-सम्मान मिल्नेछ।
बोलीको प्रभावले लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। तर्कशक्ति बढ्नेछ भने अध्ययनमा प्रगति हुनेछ। नयाँ काम सुरु गर्नको लागि समय उत्तम छ। शत्रु तथा प्रतिस्पर्धी पराजित हुनेछन्। मिहनेत अनुसार लाभ मिल्नेछ। आफन्तहरुको साथ सहयोग मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायमा समय शुभ रहेको छ। सामजिक जीवनमा मान-सम्मान बढ्नेछ।
मिहेनत गर्दा जटिल काम समेत सजिलै पूरा हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीको भरपूर सहयोग मिल्नेछ। साथी-भाईसँग भेटघाट गर्ने अवसर मिल्नेछ। उत्तम एवम स्वादिष्ट भोजनको अवसर मिल्नेछ। सामाजिक मान-सम्मान बढ्नेछ। अनावश्यक वाद-विवादबाट टाढा रहनुहोला। तपाईंको बोलीको प्रभाव अरुमा पर्नेछ। हप्ताको अन्त्यमा भने परिस्थिति प्रतिकूल रहन सक्छ।
हप्ताको प्रारम्भमा खर्चमा वृद्धि हुँदा आर्थिक समस्या आउनसक्छ। कार्यक्षेत्रमा चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ। हप्ताको मध्यमा भने परिस्थिति अनुकूल हुनेछ र नयाँ कार्य सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। स्वादिष्ट एवम उत्तम भोजनको अवसर मिल्नेछ। खान-पानमा ध्यान दिनुहोला। स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्न सक्छ। अधुरा रहेका कार्य सफल हुने देखिन्छ। मान-सम्मानका साथै विशेष उपहार प्राप्त होला।
आयमा वृद्धि हुनेछ। साथै दिगो काम प्रारम्भ हुनेछ। आर्थिक लाभ मिल्ने सम्भावना छ। मिहेनत गर्दा विशेष सफलता मिल्नेछ। हप्ताको मध्यबाट खर्चमा वृद्धि हुने देखिन्छ। आर्थिक समस्या आउनसक्छ। साथी-भाईसँग मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ। हप्ताको अन्त्यतिर भने परिस्थिति अनुकूल रहनाले मन प्रशन्न रहनेछ। स्वादिष्ट एवम उत्तम भोजनको अवसर मिल्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा सुमधुरता छाउनेछ।
मिनेनतले काम गर्दा चिताएको काम सजिलै बन्नेछ। धेरैको विश्वास जित्न सकिनेछ। कार्य सन्दर्भमा विशिष्ट व्यक्तिहरुसँग भेट गर्ने अवसर मिल्नेछ। आर्थिक लाभ मिल्ने सम्भावना छ। दिगो आम्दानी हुने काम सुरु गर्ने मौका छ। आयका स्रोत बढ्नेछन्। हप्ताको अन्त्यतिर साथी-भाईसँग भेटघाट गर्ने अवसर मिल्नसक्छ। कार्यक्षेत्रमा विशेष सफलता मिल्ला।
साथीहरुको सहयोग भरपूर मिल्नेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग भेटघाट गर्ने अवसर जुट्नेछ। मान-प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। आध्यात्मिक ज्ञानको प्रेरणाले मानसिक सुख प्राप्त हुनेछ। इतिहास तथा धर्म-संस्कृतिमा रुचि बढ्नेछ। तारिफयोग्य काम गर्दै लोकप्रियता हासिल गर्न सकिनेछ। रोजगारको खोजीमा रहेकाले सफलता पाउने देखिन्छ। दिगो काम प्रारम्भ हुनेछ र आम्दानी पनि बढ्नेछ।
परिश्रम अनुसार सफलता नमिल्दा मन चिन्तित रहन सक्छ। कार्यभारमा वृद्धि हुनेछ। आध्यात्मिक ज्ञानले दुर्भावनाका तरंगहरू समाप्त हुनेछन्। नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागि समय उचित छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँगको सहकार्यले फाइदा दिलाउनेछ। आयका स्रोत बढ्नेछन्। हप्ताको अन्त्यतिर भने शत्रु तथा प्रतिस्पर्धीसँग सावधान रहनुहोला।
Prevडेरावाल संक्रमितलाई घरबेटीले नै बनाइदिए आइसोलेसन..! उहालाई सम्मन स्वरुप एक सेयार गरौ !
Nextश्री पाथिभरा माताको दर्शन गरी ॐ लेखेर एक SHARE गर्नुस सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला
भगवान पार्वतीको पुजा गर्नाले मनले आटेको पुरा हुने…!
रन्जन कोइरालाको अहिलेको फैसलामा कुनै पनि प्याटर्नको कानुनी आधार मिल्दैन : पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्की
गल्ती गरेपछि १ सय ४२ जना यात्रुको होटल क्वारेन्टाइन खर्च एयर अरेबियाले तिर्ने